Real Estate Listings: » Business Directory » Home Improvement Contractors » US » Izinsizakalo Zokuhlanza nokuhlanzaaza: Vikela i-COVID-19!1
I-USA Clean Master ihlinzeka ngezinsizakalo zokuhlanza nokuhlanza amagciwane ukunqoba i-COVID-19 emakhaya nasezakhiweni zentengiso ezweni lonke. Sihlanza futhi sibulala amagciwane: • Izindawo eziqinile (i-Hardwood & Tile) Izindawo zokusebenza kanye nezakhiwo Indlela yokugoqeka okwenzeka nge-sporicidal ayigcini nje ukushesha kunokukwenza ngesandla kodwa futhi isebenza ngempumelelo ngoba isibulala-magciwane sisebenza ngamaconsi amancane ahlanganisa yonke indawo. I-2) Inkungu ye-Sporicide kanye ne-disinfecting ye-ducts yomoya. Imisele yomoya ingaba ngumthombo wokungcola lapho amagciwane angakhula futhi asatshalaliswe ngaphakathi kwesakhiwo. Ubuchwepheshe bethu nobuchwepheshe bezimboni busivumela ukuthi siqede ubungozi, sibulale amagciwane ahlala isikhathi eside futhi simise ukusakazeka kwamagciwane ayingozi ngaphambi kokuba abangele ukutheleleka okuthe xaxa empahleni yakho. Ochwepheshe bethu bagqoka imishini yokuvikela yomuntu siqu futhi basebenza ngokushesha ukuvikela impahla yakho ekuqubukeni. Sishayele namhlanje ku-888- 396-5195 futhi uthole isilinganiso sakho samaHALA. Ikhasi lethu lenkonzo: https://www.usacleanmaster.com/sanitizing-and-disinfecting.aspx Imininingwane eyengeziwe: Amahora ethu okusebenza: Mon-Sun 8:00 am - 8:00 pm. Izindlela Zokukhokha: Cash, Card Card, Debit Card. Iphrofayili ye-Google Bhizinisi Lami: I-COVID-19.